Trump oo loo jeediyay dhaleeceeyn la xiriirta heshiiskii cimilada Baariis - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madax-waynaha mareeykanka Donald J. Trump. sawir: Andrew Harnik
Trump oo loo jeediyay dhaleeceeyn la xiriirta heshiiskii cimilada Baariis
La daabacay fredag 2 juni 2017 kl 09.45
Madax-waynaha Mareeykanka Donald Trump oo shalay ku dhawaaqay in dalkiisu ka baxay heshiiskii cimilada ee dalka Baariis lagu gaarey ayaa dood ka dhalisay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba.
Donald Trump ayaa sheegay inuu aamin-san yahay in heshiiska cimiladu ugu fadhiyo mareeykanka goobo shaqo iyo dhaqaale uu dalku lumiyo:
–Heshiiskani wuxuu ka dhigan yahay inuu hab-nolol wanaag wacan ka raro dalka Mareeykanka una raro waddammo kale, sida uu sheegay Donald Trump.
Heshiiska cimilada ayaa uga dhigan Donald Trump lacag iyo goobo shaqo, iyadoo uu dhambaalkiisu xambaar-sanaa Ameerika oo khasaarta iyo waddammada kale oo guuleeysta. Wuxuu u soo ban-dhigay sidii waxyaabo aad u yaryar saameeynta cimilada ee heshiiska isagoona ku matalay suulka iyo farta xigta inta u dhexeeya, sida uu aamin-san yahay.
–Uma daneeynayo Baariis, waxaan u daneeynayaa Pittsburgh, sida uu sheegay Donald Trump oo magaaladaa u soo qaatay tusaale goob warshadeed iyo dhuxul laga qodo iyo warshadaha birta oo shaqo abuura.
Hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Pittsburgh, Bill Peduto, oo ka tir-san xisbiga Dimoqoqraadiga ayaan mahad-celin ka muujin farriinta madax-weeynaha:
–Midda aad sameeysay uma xumeeyn oo keliya dhaqaalaha. Waxay kaloo wax ka bedeshay aragtida caalamku ka qabay mareeykanka, sida uu sheegay Peduto.
Go’aanka Trump ayuu isaga oo ku hadlaya magaca bulshada mareeykanka dhaleeceeyay madax-waynihii hore ee dalka Mareeykanka Barack Obama kana mid ah madaxdii wax ka saxiixday heshiiska cimilada ee Baariis sidoo kale waxaa dhaleeceeyay Trump shirkado waaweyn. Laba ka mid ah madaxda sare ee shirkadaha waaweyn ayaa iska casilay jagadii la talye-nimo ee Dnald Trump.
Trump wuxuu sheegay shalay inuu doonayo inuu dib heshiiskaa loogu noqdo oo mar kale laga wada xaajoodo, hase yeeshee waxaa ku gacan seeyray si wada jir ah waddammada Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska. Madax-waynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku hadlay luuqadda Ingiriiska oo aan looga baran madaxda dalka Faransiiska wuxuu yiri:
–Dhammaan waxaa naga dhaxeeya masuuliyadda ah in aan adduunka badbaadino, sida uu sheegay Macron, isagoona isticmaalay hal-haysyadii Donald Trump mid ka mid ah, Make America great again.